Fomba fampiharana sivana marani-tsaina amin'ny Photoshop misy ohatra Famoronana an-tserasera
Para asio sivana ao amin'ny Adobe Photoshop, tsy maintsy mandeha any amin'ny «Tabilao» sivana hita eo amin'ny menio ambony. Hiseho ny menio izay ahitana ny sivana rehetra atolotry ny programa. Ny sivana dia azo ampiharina amin'ny sary, saingy koa manana safidy hampihatra sivana an-tsaina ao izahay Photoshop, izay ampiana ho is ny singa misaraka, toy izany izy ireo dia azo ovaina, tapaka ary voafafa.
1 Fomba fampiharana sivana marani-tsaina amin'ny Photoshop
2 Ohatra misy sivana marani-tsaina ao amin'ny Photoshop
2.1 Galerie sivana
2.2 Sivana tsy mazava
2.3 Sivana vokarin'ny jiro
Raha te hanofa sivana marani-tsaina dia ny zavatra voalohany ilainay dia ovay ny sosona, ny sary, ho zavatra marani-tsaina. Misy fomba roa hanatanterahana izany:
Azontsika atao ny manindry ny sosona ary mankany amin'ny tab «layer», ao amin'ny menio ambony, ary ao amin'ny menio drop-down tadiavinay "Zavatra Inteligent" ary tsindrio eo Avadiho ho zavatra marani-tsaina.
Ny safidy hafa dia ny mankany amin'ny sivana kiheba ary tsindrio "Miova ho an'ny sivana marani-tsaina".
Afaka manampy ireo sivana izahay izao. Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony mihatra ho zavatra misaraka, fa mamorona a saron-tava. Amin'ny borosy sy amin'ny loko mainty sy fotsy, afaka mandoko amin'ity sarontava ity ianao manapa-kevitra amin'ny ampahany amin'ny sary ampiharina.
Ohatra misy sivana marani-tsaina ao amin'ny Photoshop
En «Galerie sivana» manana sivana misy ianao hanome endrika kanto ny sarinao. Rehefa mankany amin'ny galeriana ianao a varavarankely misaraka, hiseho mihalehibe ny sary, can ovao ny zoro amin'ny bokotra (+ sy -) eo amin'ny zoro ambany havia. Ao amin'ny Panel ankavanana manana ny sivana voalamina ao anaty lahatahiry. Tombony lehibe iray amin'ireo sivana ao amin'ity galeriana ity satria maro no azo ampiharina amin'ny fotoana iray, mila atao fotsiny ianao Click amin'ny mari-pamantarana plus, aseho amin'ny sary etsy ambony, ary safidio ny sivana tadiavina. Raha manenina ianao dia azonao atao foana ny mamafa azy ao anaty fitoeram-pako.
Ao amin'ny folder «artistic» anananao ny sivana «nanampy sisiny», izay manome ny sary ny fisehoan'ny a sary amin'ny fomba komik. Ao amin'ny tontonana eo ankavanana, azonao atao ny manamboatra ny sivana mifanaraka amin'ny tsironao. Amin'ity tranga ity dia manolo-kevitra ny hampihena kely ny "posterisation" aho ary hampitombo ny "hamafin'ny hateviny sy ny sisiny". Ao anatin'ity fampirimana ity dia hitako koa ny sivana «loko voalefaka» Misy iray sisa endrika ivelany loko Ho an'ny sary, raha ampidininao kely ny haavon'ny borosy ary atsangano ny endriny, dia hiharihary ity vokatra ity.
Ao amin'ny folder «firafitra» azonao atao ny sivana «granulated», mety hanomezana ny toetranao ny sarinao. Izy io koa dia manome azy ireo a fikasihan-tanana.
Sivana tsy mazava
Ao amin'ny «Tabilao» sivana manana safidy azo atao ianao milaza izany "Blur". Ao amin'ity fizarana ity hahita sivana samihafa mifandraika amin'ny blur ianao. Horaisiko ny fotoana hampianarana anao fika mahafinaritra miaraka amin'ny iray amin'ireo sivana ireo.
Hikaroka izahay sary izay misy fihetsehanaOhatra ity nofidiko ity, tovovavy mihazakazaka. Tokony hifantoka ilay lohahevitra. Avy eo, andao havadika ho zavatra marani-tsaina izy io tahaka ny nataontsika teo aloha. Ao amin'ny kiheba «Sivana», «blur», hampihatra izahay «mihetsika tsy mazava ". Hisokatra ny varavarankely vaovao hametrahanao ny masontsivana manjavozavo, mila manitsy azy araka izay tianao ianao, saingy tokony ho hita ny sary tsy mifantoka.
ankehitriny, hanafina ny sivana izahay, amin'ny fipihana eo amin'ny masonao dia hankany amin'ny "layer 0" isika. Miaraka amin'ny Fitaovana "select subject", misy amin'ny fipihana eo amin'ny fitaovana fifantina haingana, hifidy ilay zazavavy izahay. Andao mankany amin'ny vakizoro "Selection", ary tsindrio "modify", "fanitarana". Mametraka a offset tokony ho 3 0 4 teboka, ny filamatra dia ny mihoatra ny kely amin'ny zazavavy ny safidy.
dia tsindrio eo amin'ny saron-tava sivana ary ao amin'ny kiheba fanovana, kitiho ny fenoy ary hifantina ny loko mainty. Ampandehano ny sivana dia ho hitanao fa izao dia toa mihatra amin'ny lamosina fotsiny izy izao. Miaraka amin'ny sarontava sarimihetsika voafantina, izahay hanery ny baiko + i (Mac) na ny fibaikoana + i (Windows) hivadika izay ananantsika. Ankehitriny ny sivana dia hapetraka amin'ny zazavavy ary ny fahatsapana ny hafainganam-pandeha sy ny hetsika dia ho lehibe kokoa.
Sivana vokarin'ny jiro
Ny sivana "Vokatry ny jiro" azonao atao izany ao amin'ny takelaka sivana, eo amin'ny menio ambony, ao amin'ny fizarana «mandika». Ity sivana ity dia tsara ho an'ny milalao miaraka amin'ny aloka sy zava-misongadina ao amin'ny sary. Azonao atao ny manova ny fampidirana hazavana, manazava ny tontolo iainana, fa koa raha mifantina ny fifantohana amin'ny tontonana ankavanana ianao dia hisy andiana boribory hiseho eo amin'ny sary Ovay ny tsipika faribolana mba hanamaizina ny sisiny araka izay itiavanao azy, mila misintona fotsiny ianao rehefa mitazona ny tsipika ny faribolana ivelany. Aza adino fa afaka manova ny sivana foana ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ao.
Araka ny efa hitanao, Photoshop dia manolotra sivana marobe. Na izany aza, voafetra ny herin'ny sivana ary ny presets afaka manome lalao bebe kokoa anao izy ireo. Avelako eto ianao a fifantenana ny hetsika sy ny preset ho an'ny Photoshop afaka tanteraka, ianao koa Manazava ny fomba fametrahana azy ireo aho Aza adino ny manandratra hatrany ny haavon'ny sarinao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Fomba fampiharana sivana marani-tsaina amin'ny Photoshop